SPC Nwụnye Method - TopJoy Industrial Co., Ltd.
Nke a ndu ga-ewe gị site na ndị dị mkpa iji wụnye gị TopJoy SPC flooring. Jide n'aka na-nlezianya na-agụ site na a ndu ka unu wee mara ụzọ kasị mma iji kwadebe maka nwụnye. Mîkayarakede soro ntuziaka nyere na ndị a na-eduzi, nakwa dị ka na-ekwesịghị ekwesị installa- u, ga-ndum nke akwụkwọ ikike e nyere site TopJoy flooring. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla banyere nke a ndu, ma ọ bụ nwere ajụjụ ọ bụla na-kpuchie ke akwụkwọ ndị a; biko kpọtụrụ TopJoy ala na: sales@topjoyflooring.com.
-Akpachara anya: Hụrụ ájá
The sawing, sanding, na / ma ọ bụ machining nke SPC ngwaahịa nwere ike na-emepụta ájá nke nwere ike ime ka akụkụ okuku ume na, anya, na akpụkpọ iwe. Machining ike ngwaọrụ ga-onwem na a ájá mkpoko iji belata airborne ájá. Eyi kwesịrị ekwesị NIOSH ẹkedọhọde ájá nkpuchi iji belata n'ebe airborne ájá. Zere kọntaktị na anya na akpụkpọ site na iji kwesịrị ekwesị ugogbe nchekwa na-echebe uwe. Bụrụ na nke iyatesịt, iwepụ anya ma ọ bụ na akpụkpọ ahụ ya na mmiri ma ọ dịkarịa ala minit 15.
Ọrụ Practices maka Mwepụ nke existent enwe ahụ iru ala Ft Ikpuchi!
Ime bụghị ájá, akọrọ zaa, akọrọ bechapu, malite ịgba, hụrụ, bead-gbawara ma ọ bụ ịkpata mgbawa ma ọ bụ egweri ẹdude resilient flooring, akwado, lining chere ma ọ bụ asphaltic "cutback" nyagide. Ndị a prod- ucts nwere ike ịnwe Asbestos Fibers ma ọ bụ crystalline silica. Zere eke ájá. Inhalation nke ndị dị otú ahụ ájá na-a cancer na akụkụ okuku ume tract odachi. Ịṅụ Sịga mmadụ gụrụ Asbestos Fibers ukwuu enwekwu ihe ize ndụ nke oké njọ aru nsogbu. Ọ bụrụ na ghaghị ụfọdụ na ngwaahịa bụ a na-abụghị Asbestos nwere ihe onwunwe, ị ga-anwa ya nwere Asbestos. Regulations nwere ike ịchọ ka ihe-anwale iji chọpụta Asbestos o ¯ n tent.
Ọ bụ na homeowner na / ma ọ bụ installer iji hụ na ezi ụdị, nlereanya, collection, na agba na-anapụta ndị jobsite tupu echichi. The homeowner / installer nwere ike ime otú ahụ site compar- u ya na "sample" na n'ala a họọrọ si, huu n'ala natara bụ chọrọ n'ala na-anara maka echichi. Ọ bụ homeowners / installers ọrụ inyocha na ngwaahịa maka ọ bụla anya ntụpọ ma ọ bụ na-emebi tupu echichi. Ọ bụrụ na n'ala adịghị izute homeowners / installers na-atụ anya na / ma ọ bụ na-anabata maka echichi; biko kpọtụrụ TopJoy tupu amalite echichi! The TopJoy flooring Akwụkwọ ikike anaghị ekpuchi ọ bụla na-ekwu metụtara ekwesịghị ịdị na ụdị, nlereanya, collection, agba, anya ntụpọ ma ọ bụ na-emebi ozugbo n'ala e arụnyere. Ọ dịghị nnọchi ma ọ bụ refunds ga-awa ma ọ bụ nyere ozugbo n'ala arụnyere!
1. nkwarụ & oge ufodu Ndidi
TopJoy SPC flooring na-arụpụtara dị na nabatara ụlọ ọrụ ụkpụrụ, nke ikike n'ichepụta, grading na eke erughị eru ka gafere 5%. Ọ bụrụ na ihe karịrị 5% nke ihe onwunwe bụ unusable, adịghị wụnye flooring. Ozugbo kpọtụrụ ere ahịa site na nke flooring zụtara. No na-ekwu ga-anabata maka ihe na anya ntụpọ ozugbo n'ala e arụnyere. Echichi nke ọ bụla ihe na-eje ozi dị ka nnabata nke ihe onwunwe.
2. ịgbakọ & ịtụ
Mgbe ịgbakọ square-footage na ịtụ SPC flooring biko conceder agbakwunye dịkarịa ala 10% -15% n'ihi ọnwụ & n'efu. SPC flooring ka ọ bụla ọzọ osisi flooring ga-ebipụ dabara gburugburu mgbochi dị otú ahụ dị ka ma-ejedebeghị na: ịrị-ikpe, mgbidi contours, ọjà, na ndị ọzọ na ezinụlọ ihe.
3. Mbupu, Ijikwa & Nchekwa
Jide n'aka na-na-echekwa SPC flooring na nchọ ụlọ na-ọma ventilated. Mgbe ịchekwa na SPC flooring:
● The n'ala igbe jide n'aka na-ahapụ ezigbo ụlọ gburugburu stacked igbe na-ekwe ka ikuku mgbasa. Echekwakwala SPC flooring katọn nso kpo oku, obi jụrụ ducts ma ọ bụ kpọmkwem ìhè anyanwụ.
● Ekwela anapụta flooring na jobsite ma ọ bụ wụnye flooring planks ruo mgbe kwesịrị ekwesị okpomọkụ ma na iru mmiri ọnọdụ e enweta. Kwesịrị ekwesị okpomọkụ ma na iru mmiri ọnọdụ na-kọwaa dị ka ndị ọnọdụ a ga-enweta na ụlọ mgbe biri n'ime ha.
ezie TopJoy SPC flooring ngwaahịa adịghị nwere ọ bụla osisi ahụ ha ka na-chọrọ ka acclimated otú ọhụrụ arụpụtara flooring planks nwere ike ịgbanwe ndị ọhụrụ gburugburu ebe obibi na-eji nwayọọ nwayọọ ruo otu ọnọdụ dị ka ọnọdụ ibi ndụ, nke na-ekwekọ n'àgwà a ikwu iru mmiri nso nke 30% -50%, na n'ime a okpomọkụ sitere na site 13C Celsius ka 38C Celsius. Ọnọdụ ndị a na-enwekarị ndị nkịtị ọnọdụ ibi ndụ nke ọ bụla nkịtị ezinụlọ.
Ya mere, ọ na-atụ aro ka acclimate TopJoy SPC flooring dịkarịa ala 1-2 ụbọchị.
5. Job Site Ọnọdụ
Ọ bụ naanị ibu ọrụ nke homeowner / installer iji chọpụta ma ọ bụrụ na ọrụ ahụ na saịtị ọnọdụ, gburugburu ebe obibi, na nwụnye n'elu (Sub-Ft) na-anabata TopJoy SPC flooring echichi dị ka nke ọma dị ka izute ma ọ bụ gafere na EN ma ọ bụ ASTM ụlọ ọrụ ụkpụrụ na ụkpụrụ. Biko jide n'aka na inwale ọrụ saịtị maka nsogbu tupu osisi flooring na-deliv- ered na nwụnye amalite.
Lé IHE: TopJoy ala akwụkwọ ikike anaghị ekpuchi ọ bụla ọdịda n'ihi, ma ọ bụ ndị metụtara, ọrụ-site na gburugburu ebe obibi / ọnọdụ ma ọ bụ sub flooring erughị eru.
The nwe ụlọ / Installer ga-eme ka n'aka ndị na-esonụ tupu wụnye n'ala:
● nwe ụlọ / Installer ga-hụ na ụlọ bụ structurally zuru ezu na ụda olu.
● nwe ụlọ / Installer ga-hụ kwesịrị ekwesị / agbanwe agbanwe okpomọkụ ma na iru mmiri condi- i e enweta. Kwesịrị ekwesị okpomọkụ ma na iru mmiri ọnọdụ ndị ndị na emepụtaghachi ọnọdụ-enwe ụlọ ozugbo nwere
● amụma mkpuchi na mmiri na iru mmiri ule e rụrụ tupu mbupu flooring na ọrụ na saịtị.
● Gbaa mbọ hụ kwesịrị ekwesị drainage dị gburugburu Ọdịdị.
6. Nwụnye Mkpa & Sub-ala
TopJoy SPC flooring a na-ewere a "ese n'elu mmiri" n'ala na arụnyere eji a click n'ala usoro. Nke a na-enye ohere TopJoy SPC n'ala na-arụnyere n'elu kasị ike na-ebupụta dị ka:
● Efere tile ● wepụrụ ebubo ● Concrete slab ● dịnụ osisi ma laminate n'ala ● Cork Efere
Sub-Ft Chọrọ: The homeowner na / ma ọ bụ installer ga-eme ka n'aka na
● Safe & Sound - Na sub-n'ala na-ekwesị ekekọtara, structurally-akwado, na-ezukọ ma ọ bụ karịa ihe niile na ọdabara obodo ụlọ codes & ụkpụrụ dị ka nke ọma dị ka NWFA (National Wood flooring Association) ụkpụrụ nduzi.
● Clean & kpọrọ nkụ -Ndị homeowner na / ma ọ bụ installer aghaghị ijide n'aka na nwụnye n'elu (sub-Ft) dị ọcha, ala akọrọ na free nke ọ bụla irighiri dị ka mbọ, wax, mmanụ ma ọ bụ ọ bụla nyagide fọduru.
● Flatness - nwụnye Mkpa / Sub-Ft Ga-ewepụghị na a ndidi nke 3/16 "kwa 10 'okirikiri (4.76mm, na a 3.05m.) Na elu ná mkpọda ga gafere 1" 6' (2.54 cm na 1,83 m). ọ bụrụ na echichi elu (Sub-Ft) adịghị izute chọrọ kwuru n'okpuru mkpa ị ga-emerịrị iji dozie nsogbu.
● Soft nwụnye ebupụta / Sub-ala - Soft Sub-ala dị ka kapet ma ọ bụ padding ga-ewepụ tupu echichi
● Ntu ma ọ bụ mama - Do bụghị ntu ma ọ bụ mama flooring na subfloor mgbe ọ bụla mgbe, ọ gwụla ma a mama-ala na ma ọ bụ ntu-ala ngwa na chọrọ.
● sere Bar ● Hammer ● ịme ọpịpị Block ● malite ịgba ● NIOSH-ẹkedọhọde Ájá nkpuchi ● Spacers ● Hụrụ ● Touch-Up Kit / kredenshial Kit ● anamusọ eto Square ● Utility Knife ● Mezie tụọ ● ese Mezie ● Safety iko
● TopJoy High njupụta ụfụfụ (LVT Underlayment) - 1.5mm ọkpụrụkpụ.
Tụrụ aro mgbanwe iberibe
● nkeji iri na ise-Gburugburu
● Iwepụ ịrị imi
8. akwadebe maka nwụnye
Kpaa iberibe & Door casings - Prep echichi site na iwepu ọ bụla ẹdude baseboards trims na ikwu n'ụzọ moldings. Undercut niile ụzọ casings na elu nke ọhụrụ n'ala n'ihi ya, ọ ga-dabara n'okpuru (Cheta na-ekwe ka a ọdịiche maka mgbasa).
Plank Direction - Lay ala planks iji chọpụta na nke direction na ogwe ga-tọrọ. Dị ka a n'ozuzu na-achị, n'ala kwesịrị tọrọ yiri ndị fọdụrụ n'ezinụlọ mgbidi. Nke a ga-ike ihe aesthetical- u ihe na-amasị anya.
Inyocha ibé osisi - inyocha bụla plank maka ezughị okè na emebi nakwa dị ka wepụ ihe ọ bụla n'ichepụta residues si ịpị ọwa tupu wụnye ma ọ bụ ọnwụ.
Mgbasawanye Abụọ - An mgbasa ọdịiche nke 1/2 "ka 5/16" ga-nyere na niile mgbidi na ofu vetikal na-ebupụta ka ohere maka mgbasa.
Okirikiri nhọrọ ukwuu - eji mpaghara nke ụlọ na-enweta ihe echiche maka a "eguzozie" layout. The obosara nke mbụ Ahịrị nke planks na-amalite mgbidi kwesịrị odika otu obosara ka ikpeazụ n'usoro na finishing mgbidi. Nke a nwere ike gbanwere rip nākpacha ogwe. The malite ma ọ bụ gụchara ahịrị ekwesịghị ịbụ ihe na-erughị 2 "n'obosara. Ma ọ bụ ọkara plank (bụla ukwuu)
9. Ozi Izugbe
● Best echichi omume na-atụ aro na ngwaahịa arụnyere n'agbata 55 ° F (13 ° C) na 100 ° F (38 ° C).
● SPC flooring nwere ike arụnyere aka 50 'x 50' (15.2 m X 15.2 m) ma ọ bụ ngụkọta nke 2500 sq. Ft. (232.3 sq m) na a 1/4 "(6.4mm) mgbasa. Ibu ebe ga na-enye a 5/8 "(16mm) mgbasa ruo 100 'x 100' (30,4 m X 30,4 m).
● All subfloor / underlayment patching ga-mere na a na-abụghị shrinking, mmiri na-eguzogide ọgwụ, elu àgwà cement patching compound.
● All subfloors kwesịrị ewepụghị na n'ime 3/16 "(4.8 mm) na 10 '(3048 mm) na 1/32" (0.8mm) na 12 "(305 mm).
Osise OF SPC echichi
UNICLIC® ntuziaka nwụnye
Method A (n'akuku-Na echichi usoro): Position na panel na-arụnyere na na n'akuku nke 20 ruo 30 Celsius na panel ugbua arụnyere. Bugharịa ihe panel jiri nwayọọ na ala mgbe agbalịsi-atụ pres- n'aka. The ogwe ga-akpaghị aka pịa n'ime ebe. Ị nwere ike ma fanye ire n'ime uzo, ma ọ bụ na uzo na na ire. Ire n'ime uzo bụ mfe usoro.
(Lee ihe osise 1a-1b -1C.)
Method B (Ewepụghị nwụnye usoro): With Uniclic® ị nwekwara ike enweta na ogwe n'ime onye ọ bụla ọzọ na-enweghị ígwè. N'ihi na nke a na usoro ị ga-eji pụrụ iche Uniclic® ịme ọpịpị ngọngọ. Planks ekwesịghị sonyeere na a otu mgbata na ịme ọpịpị ngọngọ ga-ọdụ ewepụghị n'ala. Iji zere etisa ogwe ị ga-enweta ha ọnụ nwayọọ nwayọọ. (Lee ihe osise 2A-2b.) Jiri usoro a naanị na otu ebe ị na-enweghị ike iji n'akuku-Na usoro (lee n'okpuru) .Onye fọdụrụ gị n'ala ga-arụnyere na iji n'akuku-Na usoro.
Fig 1. First plank, akpa n'usoro. Ebe a spacer nke 3/8 "ọkpụrụkpụ-ekpe na ọnọdụ ndị plank mgbidi. Mgbe e mesịrị, mgbe 3 ahịrị, i nwere ike mfe egosiputa na flooring megide n'ihu mgbidi na anya ≈ 3/8 "
Fig 3. N'ogige atụrụ na panel ala a otu edinam ije, na-eme n'aka na ogwe bụ uko megide onye ọ bụla ọzọ. N'ikpeazụ ubé enweta ala na obere ọgwụgwụ dị nnọọ arụnyere ruo mgbe ọ clicks.
Fig 4. Ná ngwụsị nke mbụ n'usoro, na-etinye a spacer 3/8 "ka mgbidi ahụ na tụọ ogologo akpatre plank na kwesịrị ekwesị.
Fig 5. Iji bee plank, iji a dị mfe na ịba uru mma na onye na-achị, na na topside-eche ihu n'elu, ịkpụ kpamkpam na otu axis. The mma ga na-aga site n'elu ma ka a miri emi ịkpụ. The plank ga-agbawasị ndammana. Mgbe ahụ, wụnye ya dị ka gara aga plank.
Fig 6. Malite nke abụọ n'ahịrị na fọdụrụ afọdụ ịkpụ akụkụ nke ikpeazụ plank. Nke a obere plank kwesịrị a min ogologo nke 10 ". Ma ọ bụghị ya, a ọhụrụ Starter ibe ga-eji. Fanye plank na n'akuku n'ime gara aga n'usoro na tap (na ogologo n'akụkụ) ọ na-eji a na ịme ọpịpị ngọngọ ruo ewepụghị.
Fig 7. Opekempe anya n'etiti obere nsọtụ nke planks ke ukem ahịrị ekwesịghị ịbụ ihe na-erughị 6 ".
Fig 8. Nke abụọ plank, abụọ n'ahịrị. Ebe ahụ panel na n'akuku n'ime uzo nke gara aga n'usoro na-eme ka n'aka na ọgwụgwụ bụ uko aga na panel. Mgbe n'ogige atụrụ na panel ala a otu edinam ije na leftof gara aga panel. Kpatụ na ịme ọpịpị ngọngọ ka ogwe uko megide onye ọ bụla other.As osisi bibie onwe ya n'ala, jiri nwayọọ na-enweta n'elu obere ọgwụgwụ na a roba mallet ruo mgbe ọ na-ekpochi.
Fig 9. Mgbe 2-3 e nyere ahịrị, kpatụ anya ka n'ihu mgbidi site ịtụkwasị spacers 3/8 "n'akụkụ mgbidi na ọgwụgwụ mgbidi. Ozugbo ukpụhọde a na-eme megide isi mgbidi, na-wụnye ruo na nke ikpeazụ n'usoro
Fig 10. Ikpeazụ n'usoro (na ikekwe ariri mbu). The Opekempe obosara nke ikpeazụ plank kwesịrị erughị 2 "dum. Cheta anya ka mgbidi bụ 3/8 ". NDỤMỌDỤ! Tinye a spacer tupu atụ.
Ozugbo niile planks na-arụnyere, na ihe ọ bụla nyagide na-gwọrọ, ewepụ spacers ma wụnye kwesịrị ekwesị trims na moldings na ọdabara ebe. Mgbe wụnye baseboards ma ọ bụ mgbidi-isi jide n'aka na ntughari mpempe adịghị pịa megide n'ala mere ikwe ka ọ na-akpali unu kpamkpam.
Always inyocha ogwe tupu echichi; Otú ọ dị, ọ bụrụ na mmebi emee n'oge echichi, na-esonụ idozi usoro nwere ike ji mee: Ọ bụrụ na a panel na-ubé mebiri emebi ma ọ bụ chipped, jupụta chakoo na a na agba adịkwa dịanyā.
Ọ bụrụ na a panel na-idiọk mebiri emebi na a ga-dochie flooring ga-mkpa disassembled azụ ka mebiri emebi planks. Kpebisie ike na nke kasị nso anya si a sidewall na-ewepụ ndị ịkpụzi. Ebuli planks a ole na ole sentimita asatọ na tap tinyere na nkwonkwo. Wepụ dum n'usoro azụ ka mebiri emebi ebe. Dochie mebiri emebi plank na ịchịkọtaghachi ndị flooring.
Ekwentị mkpanaaka: (+86) 18321907513
Tinye: Unit 603 Building 7, Lane 2449, Jinhai Rd,
Spc Planks, Spc Wood Tiles Flooring , Spc Vinyl Plank Flooring , Spc Water Proof Vinyl Flooring , Rigid Spc Flooring, SPC Vinyl Ft ,